यी हुन भान्सामा आफ्नै मालिक्नी कार्कीको वि’भत्स तरिकाले ह’त्या गर्ने चौधरी, आफुले पनि किन गरे आ’त्मह’त्या ? — Sanchar Kendra
यी हुन भान्सामा आफ्नै मालिक्नी कार्कीको वि’भत्स तरिकाले ह’त्या गर्ने चौधरी, आफुले पनि किन गरे आ’त्मह’त्या ?
परिसर प्रमुख एसएसपी राईका अनुसार घटनास्थलको मुचुल्का र ‘क्रा’इम सिन’ विश्लेषण गर्न पाटन अस्पतालबाट चिकित्सकहरूलाई बोलाइएको थियो । फरेन्सिक जाँचका लागि आएका चिकित्सकले मुनाको भजाइनल स्वाब र चौधरीको वीर्यको नमुना संकलन गरेका थिए । घटनास्थलमै प्रारम्भिक जाँचका क्रममा श्रीमती कार्कीले ‘सेनेटरी प्याड’ लगाएको देखिएको छ ।
एसएसपी राईले कार्कीको घरमा चोरी भएका बेला ललितपुरमा कार्यरत प्रायः सबै प्रहरीहरूको सरुवा भएकाले उक्त फाइल झिकाएर अनुसन्धान गरिने बताए । ‘चोरीको घटनाबारे हामीले पनि भर्खरै थाहा पाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको पनि अनुसन्धान गर्छौं । मलाई लाग्छ बढीमा ५ दिनभित्र सबै कुरा छर्लंग हुन्छ ।’